10 QARSOODI AH QAJAARKA LA KARIYEY IYO QAJAARKA - WARARKA
Miiska miiska, qajaar la qabadsiiyay ayaa leh meel qadarin leh.
Hooyooyinka intooda badani waxay ogaadaan in diyaarinta khudradda xagaaga ay fududahay, hase yeeshee dad badan oo fikradani waxay ku dhamaanayaan fashilka.
Sidaa darteed, waxaa habboon in la ogaado sirta waxtar leh.
Xeerarka xulashada dhirta
Ka taxadar noocyada kala duwan.
Fure, Nezhinsky, tartan, Murom, Nosovsky, Era, Heerka, Cascade, Voronezhsky, Altai, Beregovoi, Avangard, Vyaznikovsky 37 badanaa ku haboon salting.
Waxaa ka mid ah noocyada cusub iyo Beelaha, Khabar, guurka Merry, Zasolochny, Hermann, Paris farsamo, Liliput, F1 Nightingale, F1 Courage, F1 Nidaamka, iwm.
Baaxadda khudradda waa 5-13 cm, waa inay ahaato mid gaaban.
Sida qaangaarka ah, qajaarka waa in ay si buuxda u bislaadaan.
Doogga ee qajaarka pickling waxaa lagu kala gooyay dusha sare, madoow iyo madow, oo ah dhumuc ku filan.
Darajada cusub ee khudaarta cagaaran waa inay ahaato mid adag, dabacsan oo leh maqaarka qabow. Haddii kale, qajaaradu ma dhadhamin doonaan wax fiican ee pickling.
Midabka badeecadda waa inuu noqdaa mid caleenta ah oo aan cagaarnayn.. Miro badani waxay leedahay miraha adag iyo diirka.
Dhadhanka khudradda waa inay ahaato mid fiican, oo aan qadhaadh lahayn. Haddii qajaarku qadhaadh yahay, saliintu way sii ahaanaysaa.
Qarsoodi ah dhadhanka khudaarta cusbayn
Waxaa jira boqolaal raashin ah oo saliin lagu dhajiyo, dhammaantood waxay leeyihiin malayga, cusbo iyo dill. Si aad u sameyso alaabta kala duwan ee dhadhanka, ku dar isku darka ah ee jawi: toon, amaranth, caleemaha geedaha, currants iyo jeeriga, laurel.
Waxaad isticmaali kartaa buuggan soo socda.
Wixii 1 koob oo saddex litir ah qaado caleemaha fardaha, 10 caleemo ah amaranth, 5 caleemaha of currant, 1 dallad of dill, 3 caleemo, 2 xabo oo toon ah, 3 digir oo ah basbaaska madow, 60 g oo cusbo.
Khajaarka waa la dhaqaa waxayna da'doodu tahay 2-6 saacadood biyo qabow. Waxay ubaahantahay in la beddelo 2-3 jeer.
In weelka, ugu horeysay ku dhaji dhir udgoon, ka dibna safka hore ee qajaarka si toos ah, kaas oo ku haboon si wadajir ah. Qadarka haray waxaa lagu dhajin karaa go'aanka martida.
Tufaaxa khudradda waa la gooyaa karaa ama maahan - tani sidoo kale waa doorasho.
Qaadashada qadarka saxda ah ee biyaha ee brine, waa inaad ku shubtaa digsiga, ku dar 50 g oo cusbo ah 1 litir, karkari oo ku shub khudaarta.
Sidaas darteed qajaarka waa in la gooyaa 3 ilaa 5 maalmood heerkulka qolka. Haddii gurigu leeyahay hoose hoose, xir xidhan oo leh dabool caag ah oo adag oo ka baxaya jiilaalka.
Waxaad ku shubi kartaa daboolka maqaarka, marka hore markaad dhoobo qashinka iyo baakada leh dhar cusub oo la diyaariyey.
Dhadhanka ugu wanaagsan ee qajaarka waxaa la helaa marka, 5 maalmood ka hor bilaha cusub, ku shub khudaarta leh brine, ka dibna u duub oo iyaga ku ridaan Maqsin.
Si looga fogaado caaryada, waxay xididada fareemka ku ridaan maraqa khafiifka ah ee weel. Haddii khudradda la cusbaado foosto, waa in la kariyaa iyadoo la jarjarayo kiriimyada, dill iyo geedo kale.
Dufanka mastarad, ku dar sida 1-2 tsp, ma oggolaan doono halsano.
Noocyada qajaarka qajaarka
Waa sahlan tahay in la soo saaro badeecadan, laakiin sealadu si fiican bay u ilaalinayaan, iyo dhadhanka ayaa ah sida khudradda loo isticmaalo si madax-bannaan iyada oo aan wax lagu darin sida saxan dhinaca.
Dooro pickles si aad u qaadato waa inay la mid tahay sida brine. Qarsoodiga ah dhadhanka - marinade.
Saldhigga cuntooyinka oo idil waa isku dhaf ah sonkor, milix, dhir udgoon iyo dhir udgoon (basbaaska madow, caleen caleen, allspice, toon, kalluun geel), khal (ama cuntada kale ee cuntada).
Saameyntu waa muhiim - dhadhanka alaabta waxay kuxirantahay xaddiga dhirta.
Wixii marinade waa inuu qaataa 1 litir oo biyo ah, 2 tbsp. l cusbo, 3 tbsp. malqacadaha sonkorta, 9% geedo - 100 g oo khudrad ah ayaa lagu daboolay dhowr siyaabood:
Biyo diiran. In weel dhir udgoon iyo khudaar, marinade ama biyo karkaraya ayaa lagu shubay 2-3 jeer 3-5 daqiiqadood. Markii ugu dambeysey ee aad u baahan tahay inaad ku darto geed isbariineed iyo dalbo weel.
Habka jilicsan. Marinade la'aan kuleyl ayaa lagu shubaa weel, kaas oo isla markaa la duubay.
Dhalmada. Bangiyada leh waxyaabaha la soo saaray ayaa la nadiifiyey.